“အတွေးစလေးတွေ”: ဆောင်းဦးကြို စာမေးပွဲ . . .
ဆောင်းဦးကြို စာမေးပွဲ . . .
တမြန်နေ့ညနေ ၄နာရီကျော်ကျော်လောက်ကစလို့ ရာသီဥတုက အအေးဓာတ်ကဲလာပါတယ်။ တစ်နွေလုံး ခြစ်ခြစ်တောက်အောင်ပူခဲ့ရာကနေ အမှတ်မထင်စအေးလိုက်တော့ နေရထိုင်ရ တော်တော်ခက်သွားသလိုပါ။ ပြောလောက်အောင် သိသိသာသာအေးတာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အပူရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ နေသားကျနေတာ လေးငါးလလောက်ကြာပြီဆိုတော့ ခပ်စိမ့်စိမ့်လေး အေးနေသလို ခံစားရပါတယ်။
ည၉နာရီလောက် အပြင်ထွက်တော့လည်း အေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနေညတို့မှာ ထမ်းဆောင်နေကျ တာဝန်ကျေပြွန်ရလေအောင် ထိုင်နေကျလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားထိုင်ပြီး အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးဘောလုံးပွဲလေးတော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်သွားကြည့်ရပါတယ်။ လူတစ်ကိုယ်မှာ ၀ါသနာတစ်မျိုးမှ ရှိမထားရင်၊ ကိုယ့်ဝါသနာကို ကိုယ်သိမထားရင် ပျက်စီးဖို့များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက် စိတ်အပန်းဖြေစရာလည်းဖြစ်၊ အန္တရာယ်လဲမရှိနိုင်တဲ့ ဒီဝါသနာလေးကိုတော့ တယုတယ မွေးမြူထားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ပတ် ဘောလုံးပွဲလေးတွေ မျှော်ရင်းအသက်ရှင်ရတာလဲ တစ်မျိုးတော့ အရသာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သူများတွေလို ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်းကို ငွေအားပေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ လူပဲအားပေးပါတယ်။ သူများလုပ်အားကနေ ကိုယ်ပိုက်ဆံရဖို့ မျှော်လင့်တဲ့သူကတော့ မဟာလူမိုက်ကြီးဖြစ်မှာ သေချာပါရဲ့။
အေးပါတယ်။ သီတင်းလည်းကျွတ်၊ မိုးတော့မလွတ်ပေမယ့် ရာသီကတော့ ဆောင်းနဲ့တူလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက ဒီဒေသမှာ နှင်းမမြင်ရခြင်းပါ။ လူမှန်းသိကတည်းက ဆောင်းတွင်းဆိုရင် နှင်းငွေ့ဝေေ၀ထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာဖြစ်လို့ နှင်းငွေ့တွေကိုတော့ လွမ်းမိပါသေးတယ်။
လဆန်း၁ရက်နေ့ ရောက်လာပြီမို့ လပတ်စာမေးပွဲ သီတင်းပတ်ရောက်ပြန်ပါပြီ။ ညနေ၄နာရီကစလို့ ဖြေလိုက်တာ ချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့ ညပိုင်း၇နာရီထ်ိုးမှပဲ ပြီးပါလိမ့်မယ်။
ဒီလကတော့ အခါတိုင်းလို ၁နာရီစာ စာမေးပွဲငယ်မဟုတ်တော့ဘဲ ၃နာရီစာ စာမေးပွဲကြီး စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ ဒီလပိုင်းမှာ ၁နာရီခွဲစာ စာမေးပွဲလတ်စစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနာဂတ်ကို လှမ်းမမြင်ရတာကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ စောစောစစ်ရင် ကိုယ့်ကလေးတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ မနှစ်ကတော့ ဒီအချိန်ဆိုရင် ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေ ဘာမှမပြင်ဆင်ကြသေးပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ကတော့ မနှစ်ကလို အေးလို့မဖြစ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျောင်းသားအင်အားက မနှစ်ကထက် နှစ်ဆဖြစ်လာသလို၊ ကိုယ့်နာမည်လည်း မနှစ်ကထက် ပိုရလာလို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ဘယ်လိုကျောင်းသားမျိုးမဆို ထိန်းနိုင်တယ်လို့ နာမည်ရထားတာကြောင့် ဒီနှစ်ကလေးတွေမှာ လက်ရွေးစင်ကလေးတွေ ပိုများလာပါတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ လက်ရွေးစင်ဆိုတာ သူများတွေလက်နဲ့ရွေးထုတ်ရာမှာ အပြင်ကိုစင်ထွက်နေရစ်တဲ့ ကလေးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ အများစုက မိဘက မနိုင်ကြတဲ့ကလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘမနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ နိုင်အောင် ထိန်းရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို အရောင်တင်ပေးရမှာ “ လမ်းပြကြယ် ” ရဲ့ အဓိက တာဝန်ပါ။
ခါတိုင်းလတွေမှာတော့ တစ်ဝိုင်းကို မေးခွန်းတစ်စုံထုတ်ပေးပြီး ကိုယ့်ဝိုင်းမှာကိုယ်ပဲ ဖြေခိုင်းပါတယ်။ ဒီစာမေးပွဲကိုတော့ ၀ိုင်းအားလုံး၊ ကျောင်းသားအားလုံးပေါင်းပြီး မေးခွန်းတစ်စုံတည်းကို ဖြေခိုင်းထားပါတယ်။ ဒါမှ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အနေအထားနဲ့ အဆင့်အတန်းကို သိနိုင်မှာမို့ပါ။ ဒီစာမေးပွဲရမှတ်ဟာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တကယ့်အနေအထားမှန်ကိုတော့ တိတိကျကျမဖော်ပြနိုင်သေးပေမယ့် တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လုပ်အားနှုန်းနဲ့ လေးစားမှု၊ အာရုံစိုက်မှုကိုတော့ အကောင်းဆုံး သုံးသပ်နိုင်အောင် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာမေးပွဲရလာဒ်ကို အခြေခံပြီး လာမယ့်သုံးလစာအတွက် သင်ကြားမှုစံနစ်ကို ပြန်ပြီးရေးရမှာပါ။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တိုးတက်မှုနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြည့်ပေးနိုင်အောင် စီမံကိန်းပြန်ဆွဲပေးရပါလိမ့်မယ်။
ဒီသုံးလဟာ တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ သုံးလကို ကျောင်းသားသင်္ချိုင်းလတွေလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဲဒီလပိုင်းတွေဟာ ကျောင်းဖွင့်တာ သုံးလကျော်လာပြီဖြစ်လို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တက်ကြွမှုနဲ့ လေးနက်မှု ကျဆင်းစပြုလာတဲ့ လတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဖို့ကလည်း လေး၊ ငါးလလောက် လိုသေးတာဖြစ်လို့ ကြောက်စရာလန့်စရာနဲ့လည်း ဝေးနေပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတာနဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကလည်း မှိုလိုပေါက်အောက် ပေါလာလေ့ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဓာတ်ကောင်းအောင် ကျင့်ပေးထားပေမယ့် ဆိုင်းသံ၊ ဗုံသံကြားရင် မနေနိုင်ကြတဲ့ ကလေးသာသာ အရွယ်တွေမို့ ဒီလပိုင်းတွေမှာ အာရုံကို တော်တော်စုစည်းနိုင်အောင် ကျင့်ပေးနေရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူ့သဘာဝအရ ပုံစံတူ တစ်ခုထဲကို ထပ်ကာ၊ ထပ်ကာလုပ်နေရရင် ငြီးငွေ့လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ကြားမှုပုံစံနဲ့ အနေအထားကို မကြာမကြာ ပြောင်းပေးမှပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာသင်ချိန်တွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် ထိန်းထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူရဲ့ဦးဏှောက်ဟာ သူအကျင့်ရနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တာမို့ပါ။ ဒါတွေတင်မကဘဲ ကျောင်းသားတွေ အမြဲတမ်းတက်ကြွမှုရှိအောင် အခက်အခဲတွေကို တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဖန်တီးပေးရပါတယ်။ အခက်အခဲဆိုတာမျိုးဟာ လူတွေရဲ့ ဇွဲ၊ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကြိုးစားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်တဲ့ အရွယ်တွေဖြစ်တာမို့ အခက်အခဲက ကြီးလွန်းနေရင် အရှုံးပေးချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်တာမို့ အမြဲချိန်ဆပြီး ပေးရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုပ်ကို ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့ သဘောသဘာဝချင်းဆင်တူတယ်လို့ ကိုယ်ယူဆဖြစ်တာပါ။
မနှစ်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေထဲမှာ နှစ်တက်ကျောင်းသားတွေက နှစ်ကျတွေထက် ပိုပြီးထူးချွန်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ နှစ်တက်ကလေးတွေက နှစ်ကျတွေထက် ပိုအားနည်းနေပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုအာရုံစိုက်ပေးနေရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နှစ်ကျကျောင်းသားဆိုတာ အထက်တန်းကျောင်းကို သွားစရာမလိုတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေများကြပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် မောင်းနှင်ပေးလို့ရပါတယ်။ နှစ်တက်ကလေးတွေမှာတော့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ အချိန်အတော်များများပေးထားရတာဖြစ်လို့ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ အချိန်သိပ်မရှိပါ။ ရသမျှအချိန်လေးမှာ အတင်းလုပ်ပေးနေရပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာ ကလေးအများစုက ငပျင်းလေးတွေဖြစ်နေတော့ ပိုတောင်သတိထားရပါသေးတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲပျင်းပျင်း အချိန်တန်ရင်တော့ သူတို့လည်း အောင်ချင်ကြမှာတော့ သေချာတာထက်တောင် ပိုပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကိုလည်း ကိုယ့်သင်ကြားမှုနောက်ကိုပါလာအောင် ကြိုးစားပေးရပါတယ်။ အိမ်မှာစာမကျက်ရင်တောင် ကိုယ့်ဆီမှာ နေ့တိုင်းကျောင်းတက်ရင် တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို မကျက်ရဘဲ ခေါင်းထဲထည့်ပေးနိုင်အောင် အပင်ပန်းခံကြိုးစားပေးပါတယ်။ သူတို့စာမဖတ်ရင် ကိုယ်ကပဲ သူတို့နဲ့အတူ ၀ိုင်းဖတ်ပေးပါတယ်။ သူတို့စာမကျက်ရင် ကိုယ်ပါဝိုင်းကျက်ပေးပါတယ်။ အိမ်မှာဘာမှ အလုပ်မလုပ်တဲ့ကလေးတွေကို ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာပဲ အားလုံးလုပ်ခိုင်းပါတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီအသက်အရွယ်အထိ ဘယ်ကျောင်းသားကိုမှ အိမ်မှာစာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျက်တယ်လို့ မယုံခဲ့ပါ။ ရည်မှန်းချက်ကြီးခဲ့တဲ့ ကိုယ်တို့တောင် တစ်ခါတစ်ခါ ပျင်းစိတ်ဝင်တတ်ပါသေးတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀ကဆိုရင် ကျောင်းသွားရမှာပါ ပျင်းတဲ့အခါတွေ ရှိပါသေးတယ်။ မိဘရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ ကောင်းလွန်းလို့သာ ဒီအဆင့်ကို ရောက်ခဲ့တာပါ။ ဒီဘက်ဒေသက မိဘများကတော့ ကိုယ်တိုင်က ပညာမတတ်ရှာကြရုံသာမက စားဝတ်နေရေးအတွက်ကို ပိုလို့အာရုံထားကြရတာကြောင့် သားသမီးပညာရေးကို ကိုယ်တို့မိဘတွေလောက် ပံ့ပိုးမှုမပေးနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကပဲ အစစအရာရာ တာဝန်ယူမှ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးပျင်းလေးတွေများလေ ကိုယ်တို့အစွမ်းပိုပြရလေမို့ ကျေနပ်ပါတယ်။
ပျင်းချင်သလောက်ပျင်း၊ ဖျင်းချင်သလောက်ဖျင်းပါစေ အချိန်တန်ရင်တော့ အောင်မြင်မှုရအောင် ယူနိုင်ဖို့ အခုထဲက ခါးတောင်းကြိုက်မဖြုတ်တမ်းပေါ့။ ။
Posted by Han Kyi at 1:42:00 pm
မြန်မာကဗျာဖွဲ့နည်း . . .
ခေတ်မီမီ ကမ္ဘာကြည့်ကြည့်မြင် . . .
ချမ်းသာချင်တဲ့ ဦးဟန်ကြည် . . .
ကိုယ့်မူ၊ ကိုယ့်ဟန် . . .
ဆရာ၊ ဒကာ ညီညာစွာဖြင့် . . .
နာလေးနာ . . .
တင် . . . ပျောက် . . .
သီတင်းကျွတ်ပြန်ပြီ . . .
ခွေးကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာ၁၀မျိုး . . .
ခွေးကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား . . .
ကျေးဇူးရှင် . . .
ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် ၁၀ကား . . .
အနုပညာ . . .
၀ိညာဉ်နေတဲ့ အရုပ်ကျွန်း . . .
စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံး ပန်းငါးမျိုး . . .
ကမ္ဘာ့သရဲအခြောက်ဆုံး ၁၀နေရာ . . .
သရဲအခြောက်ဆုံး ဟိုတယ် . . .
၀ီရိယပြည့် မနက်ဖြန် . . .
ရှောင်တခင် ခရီးစဉ် . . .
မော်ကွန်းမ၀င် ၁၀ သုံးလုံး . . .
အသက်နှစ်ထောင် ဂုရုကျောက် . . .
ခွေးမြီးပညာရှိ . . .
ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ပြင် . . .
ပုဆိုးသွားဝယ်တယ် . . .
ပင်ပန်းလိုက်တာ . . .
ချောကလက်နဲ့လုပ်တဲ့လှေ . . .
Real-life 'Iron Man' suit has gone on sale